Racket Boys – Gold Channel Movies
Episode 14 Jul. 13, 2021
Episode 15 Jul. 19, 2021
Racket Boys 2021(라켓소년단)
Prison Playbookကိုရေးသားခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာ Jung Bo Hoonနဲ့ ဒါရိုက်တာ Jo Young Kwangတို့ရဲ့ လက်ရာ “Racket Boys”ဆိုတဲ့ Dramaလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အငယ်တန်းအားကစားပြိုင်ပွဲမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမယ့် ဟဲနမ်မြို့ အလယ်တန်းကျောင်းက အမျိုးသားကြက်တောင်အသင်းရဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ…
Yoon Hyun Jongဟာ တစ်ချိန်က ဟဲနမ်အလယ်တန်းကျောင်း အမျိုးသားကြက်တောင်အသင်းရဲ့ အတော်ဆုံးကစားသမားဖြစ်ခဲ့ပြီး လက်ရှိမှာ အသင်းရဲ့နည်းပြတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေသူပါ။ ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသေးတဲ့ ကစားသမားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ သူရဲ့ကြက်တောင်အသင်းကတော့ ပျက်လုဆဲဆဲအခြေအနေမှာပါ
တစ်ဖက်မှာ‌တော့ Ra Young Jaဟာ ဟဲနမ်မြို့မှာပဲရှိတဲ့ အလယ်တန်းကျောင်းနောက်တစ်ကျောင်းက အမျိုးသမီးကြက်တောင်အသင်းရဲ့ နည်းပြပါ။ မတူတာတစ်ခုက သူမရဲ့အသင်းဟာ ရွယ်တူတန်းအသင်းတွေထဲမှာ‌ နံပါတ်၁ဆိုတော့ ဒီကားလေးကို လူငယ်တွေကြားက ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တဲ့ အားကစားပြိုင်ပွဲvibeမျိုးနဲ့ GCပရိတ်သတ်ကြီးတို့က အပတ်စဉ် တနင်္လာ, အင်္ဂါနေ့တိုင်းမှာ‌ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေး ကြည့်ရှုကြရမှာပါ
Translated by Aye Thinzar Moe,Loon,Phyo and Thae
ElisaSeptember 5, 2021Reply
Feel free to surf to my website – asmr of
MarcoSeptember 4, 2021Reply
I really loved what you had to say, and more than that, how you presented asmr it (http://tinyurl.com).
PhillisSeptember 2, 2021Reply
FlorianSeptember 2, 2021Reply
My web-site – my asmr – http://bitly.com/38vuS56,
FelipeSeptember 2, 2021Reply
AntwanSeptember 1, 2021Reply
my web blog :: where quest bars (t.co)
AnnAugust 30, 2021Reply
Also visit my web blog … an quest bars (t.co)
DarrylAugust 28, 2021Reply
Every weekend i used to payaquick visit this web hosting website, for
Su Thanda ChoJuly 14, 2021Reply
Racket bou ep 14 please
JulioJune 2, 2021Reply
Joseon Exorcistနေရာမှာလာတာဗျ Taxi DriverအစားကPenthouseလာမှာ
Victor KhaiMay 31, 2021Reply
Taxi Driver မှာ အစားထိုးတဲ့ကားလား
Aung Bo ThweJune 9, 2021Reply
Taxi Driver အစားထိုးကားက ဒါမဟုတ်ဘူး Penthouse ပါ